Tsvaga dzimwe dzetsika dzinonakidza dzeChina | Kufamba Nhau
La ChiChinese tsika ndeimwe yevekare kwazvo pasi uye zvakare yeakanyanya kuwanda uye akaomarara. Izvo hazvigoneke kufukidza zvese izvi zvinoreva nemazwi mashoma, asi isu tichazongotanga neimwe yetsika dzinozivikanwa dzeChinese idzo pasina mubvunzo dzakamutsa kuda kuziva kwevashanyi pasirese. Dzimwe idzo tsika dzakapembererwa kwemazana emakore uye tsika iyi inogara ichitishamisa nekukura kwedu uye takasiyana nedzedu.
Tichaziva dzimwe dzetsika dzeChina izvo chikamu chetsika yavo uye izvo zvatingave takanzwa nezvazvo. Usati washanyira chero nyika zvinogara zvakakosha kuti ubvunze nezvetsika nemagariro ayo kuti usvike neimwe pfungwa yezvatichawana.
1 Chinese Nyowani Nyowani
2 Lantern Mutambo
3 Chinese dhiragoni
4 Chinese tii mhemberero
5 Chinyakare chinese chipfeko
6 Zororo retsika
Chinese Nyowani Nyowani
Wese munhu akanzwa nezveChinese Nyowani nekuti vanoipemberera pamisi yakasiyana pane yepasirese pasirese. Iyo tsika inokwezva kutarisisa kwakawanda, kubva kutenderera pasirese chinotarisa pana Zvita 31 sekupera kwegore kutanga kuverenga rimwe gore, nepo kuChina kusiri. Vhura China inotongwa neakarenda yemwedzi, nekutanga kwegore pazuva rekutanga remwedzi wemwedzi izvo zvinogona kusiyana gore negore. Iyo iri mukati memazuva makumi mana nemashanu mushure menguva yechando solstice uye mazuva makumi mashanu kusati kwasvika chitubu. Sezvineiwo panotanga gore, maChinese anofanirwa kuvhura mikova nemahwindo kuti gore rapfuura ribude uye vagadzire nzira yezvinhu zvese zvitsva zviri kuuya.
Mushure memazuva gumi nemashanu egore idzva mukurumbira e zvinoshamisa mwenje mutambo munzvimbo dzakasiyana dzeChina. Mumutambo uyu, zvese zvakapfekedzwa nemwenje dzeChinese izvo zvatakaona mazana enguva uye zvinovhenekerwa kuzadza zvese nechiedza uye neruvara. Kupedza mhemberero dzeGore Idzva, mhemberero dzinoitwa nezviratidzo zvakaita shato uye kuratidzwa kunoitwa izvo dzimwe nguva zvinoratidza mhuka inotonga chiratidzo chezodhiac gore iro.
El Chinese dhiragoni imhando yechinyakare mhuka yeChina. Ichowo chikamu cheimwe tsika dzeAsia uye ine zvikamu zvakasiyana zvezvimwe mhuka zvakaita seyenyanga dzemhembwe, mhino yembwa, zviyero zvehove kana muswe wenyoka. Nechekare panguva yeHan Dynasty dhiragoni inoonekwa sechikamu chetsika, mazana emakore apfuura. Nekufamba kwenguva yanga ichiwana masimba akasiyana uye inoenderana nekutonga kwemamiriro ekunze semvura inonaya. Yakave zvakare chiratidzo chechiremera chemambo. Ngazvive sezvazviri, isu tese tinobatanidza dhiragoni neChina tsika nhasi.
Chinese tii mhemberero
Kana tichitaura nezvemhemberero yetii tinowanzofunga nezveJapan, asi kuChina chinwiwa ichi chinewo kukosha kukuru mutsika dzavo. Inofungidzirwa musimboti chinwiwa chinorapaYakazoenderera mberi ichigamuchirwa nemakirasi epamusoro kuti pakupedzisira ive mhemberero. Mateti matatu anoshandiswa mumhemberero iyi. Mune yekutanga mvura yakabikwa, mune yechipiri mashizha anosara kuti apinze uye mune yechitatu tii inodhakwa.
Chinyakare chinese chipfeko
Kupfeka kunogona kuve imwe yetsika dzinozivikanwa dzeChinese. Kune akawanda zvidimbu zvekupfeka zvinonyatso kuzivikanwa neChina tsika. Iyo qipao muenzaniso wakanaka, ndeimwe sutu iyo yaimbova nehombodo refu uye yakanga isina kusimba. Iyo inoshandiswa pazviitiko zvakawanda nemuvara mutsvuku, unounza rombo rakanaka. Sechido chekuda kuziva kuti paive nemimwe mirawo yakarambidzwa yehembe idzi dzakadai yero nendarama dzaive dzakabatana namambo, shava raive remhuri yeumambo, chena yaive matauriro ekuchema kana nhema iyo yaionekwa seruvara kusavimba.
Mukuwedzera kune zvataurwa pamusoro apa Chinese New Year kana iyo inonakidza Lantern Festival, kune mimwe mitambo yakakosha muChina yekucherechedza. Iyo Mutambo weQinming kana Zuva reMweya Yese nderimwe zuva rakakosha kwavari. Inopembererwa kutanga kwaKubvumbi kukudza madzitateguru nekuunza zvipiriso nezvinonhuwira kumakuva netemberi. Mutambo weMwedzi kana Mid-Autumn Mutambo unocherechedzwawo pazuva remwedzi wechisere wakazara, kana uchinge wakajeka. Ivo vanopembererwa mumaguta uye dingindira rakanangidzirwa pamwedzi, nemarambi, mwenje, zvishongedzo uye mafaro. Ichowo zororo munodyirwa Makeke eMwedzi, makeke akazadzwa ayo akagadzirirwa chiitiko ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Tsika dzeChina